Turret Milling Machine Factory - Mpanamboatra milina fikosoham-bary China, mpamatsy
Masinina fanodinana Turret, Masinina fanodinana karazana lohalika 3E, masinina fitotoam-bolo, haingam-pandeha
Dimension: 1500 * 1700 * 2150mm Tolerance Spindle: 0.005mm Max.disty avy amin'ny spindle sy ny latabatra: 400mm hafainganam-pandeha: 80-5440rpm lanja mavesatra: 1280kg anarana: milina fanodinana Turret 1. Vidiny ambany misy kalitao tsara.2. Fandeferana amin'ny spindle: 0.005mm.3. Ny lohan'ny fikosoham-bary dia mandray maotera 3HP, lohan'ny pulley haingam-pandeha 16, loha hafainganam-pandeha miovaova tsy voatery. 4. Nivory tany Sina ny ampahany Taiwan .5. Ny làlan'ny torolàlana trebletail dia nalaina tamin'ny axis telo, noho izany dia mora ny manitsy sy manamboatra.6. Mety amin'ny appli ao an-trano ...
1372 * 330mm latabatra haben'ny marindrano boribory fikosoham-bary nataon'i 150mm Spindle Quill
Anarana: Mitsivalana sy mitsangana fikosoham-bidy X / Y / Z Axis Travel: 900 * 380 * 360mm Lehibe latabatra: 1270 * 254mm fitsangatsanganana Quill: 127mm Rate Power: 3HP Spindle Taper: R8 (NT30) refy: 1720 * 1870 * 1670mm Net Milanja: 1500kg 1270 * 254mm Latabatra Taiwan Milling Milling Horizontal sy Vertical Milling Machine 1. Taiwan milling head and ball screw. 2. Mety amin'ny fanodinana semi-marokoroko. 3. Fampiharana: milina fanjairana, bobongolo vita amin'ny kiraro vy, famantaranandro, sns. 4. Mora ny mahazo milina mitsangana ...
Dimension: 1500 * 1700 * 2200mm Milling Head: Taiwan Original Milling Head Spindle Taper: R8 (NT30) Misy laharana fahefana: 3HP anarana: Milling And Boring Machine Latabatra habe: 1270 * 254 * 90mm X / Y / Z Axis Travel: 900/370 / 360mm lanja mavesatra: 1400kg Miorina tsara ny fitotoana votoatin'ny milina ary ny milina mankaleo 4PM ◆ Mety amin'ny fitaovana elektronika, milina optique ary fitaovana mandeha ho azy, fanodinana singa tena ilaina semiconductor. ◆ Mety amin'ny mankaleo, fikosoham-bary, fandavahana ary habe hafa toerana avo ...
1372 * 330mm latabatra haben'ny milina fanodinana horonam-bolan'ny 150mm Spindle Quill
Karazana masinina: Travel mitsivalana sy mitsangana: 1000 * 400 * 420mm haben'ny latabatra: 1372 * 330mm fitsangatsanganana amin'ny spindle quill: 150mm hery: 5HP Spindle Tolerance: 0.002mm 1372 * 330mm latabatra marindrano sy milina fanodinana volo 150mm Spindle QuillProduct Features 1. Fampiharana: milina fanjairana, lasitra vy amin'ny faritra vy, famantaranandro, sns. 2. Mety amin'ny fanodinana semi-marokoroko sy mazava tsara. 3. Volafotsy loha sy volo baolina fikosoham-bary. 4. Ny fikosoham-bary, ny fikosoham-bary ary ny fikosoham-bary miisa 45 dia mety ...
Universal 5HP milina fanamafisam-peo milina fanoratana milina 1570 * 405mm haben'ny latabatra
Dimension: 2000 * 3050 * 2150mm Misy laharana hery: 5HP Max. Elanelana Avy eo amin'ny spindle mankany amin'ny latabatra: 760mm anarana: latabatra karazana fikosoham-baravarankely habe: 1570 * 405mm X / Y / Z Travel Axis: 1500/350 / 580mm Taiwan headhigh precision milling milling and machine mankaleo B600L + Bed milling fikosoham-bary, henjana avo ary lehibe mitondra fahaiza-manao + Taiwan tany am-boalohany fikosoham-bary lohany, baolina visy, NSK P4 fametrahana mazava tsara ampela, fandefasana ampela 0. 002mm. + Famaky telo no mampiasa visy baolina marina, miaraka amin'ny hazakazaka haingana sy ...
NT40 / 7.5HP Bed Type Turret Machine manosika vertika Taiwan Original Milling Head
Dimension: 2000 * 2230 * 2150mm Heading milling: Taiwan Original Milling Head Spindle Taper: NT40 Hery naoty: 7.5HP Max. Halavirany avy eo amin'ny spindle mankany amin'ny latabatra: 760mm anarana: latabatra milina fanoratana karazana haben'ny habe: 1370 * 405mm X / Y / Z Travel Axis: 1000/350 / 520mm Taiwan Original milling milling ary milina mankaleoB600SC 1. 7.5HP / NT40 Spinlde, Taiwan marina marina fikosoham-bary. 2. Masinina fikosoham-pandriana, henjana avo ary fahaiza-mitondra lehibe. 3. Japoney NSK P4 fametrahana mazava tsara spindle, spindleto ...
Steel Industrial Bed Type Milling Machine 1370 * 405mm Taratasy avo lenta
Takelaka latabatra: 1370 * 405mm lohan'ny fikosoham-bary: Taiwan Original Milling Head X Axis Travel: NT40 Misy laharana hery: 5HP Max.distation avy amin'ny spindle ka hatramin'ny latabatra: 760mm anarana: Bed Type Milling Machine 5HP Bed Type Milling Machine NT40 Spindle B600 Taiwan Original Milling HeadProduct Details : 1. Ampiasaina be amin'ny fikirakirana asa lehibe sy lehibe (800-1000kgs). 2. NSK P4 bearings dia noraisina tamin'ny spindle hanatsarana ny fahamarinan'ny milina ary hampitombo ny fiainana miasa. 3. vy mahery vy, hone anatiny ...
NT40 / 5HP Spindle Turret Head Milling Machine Miaraka amin'ny karazana fandriana Turret RAM amin'ny fametahana milina RAM
Dimension: 2000 * 2230 * 2150mm Heading milling: Taiwan Original Milling Head Spindle Taper: NT40 Hery naoty: 5HP Max. Ny halavirana avy eo amin'ny spindle mankany amin'ny latabatra: 760mm anarana: latabatra karazana fikosoham-baravarankely habe: 1370 * 405mm X / Y / Z Travel Axis: 1000/350 / 640mm lohan'i Taiwan Karazana fandriana karazana fikosoham-bary ary milina mankaleo B600 1. Ampiasaina be ary ny fizarana asa lehibe (800-1000kgs) fanodinana. 2. NSK P4 bearings dia noraisina tamin'ny spindle hanatsarana ny fahamarinan'ny milina ary hampitombo ny wor ...
Milina fikosoham-bolo mitondra torolàlana tsara, Masinina fikosoham-bolo boribory boribory telo
Fitsangatsanganana: 1000 * 460 * Screw 520mm: Screw latabatra baolina: 1370 * 405mm Quill: 140mm Hery: 7.5HP anarana: Masinina fikosoham-baravarankely 7.5HP Milina fikosoham-baravarankely miaraka amina ekipa telo Screw B600SC Endri-javatra momba ny vokatra: 1. Fikolokoloana ary mahcine mankaleo ho an'ny fanodinana singa avo lenta. 2. Karazan-fandriana, mpilalao meehanite, henjana be, fahaiza-mitondra tsara.3. Loharano fikosoham-bary tany Taiwan tany am-boalohany, visy baolina ary NSK P4 mahazaka fandeferana marina: 0.002mm 4. Mety amin'ny mavesatra sy ...
Milina fanodinana Turret Mill Machine, NT40 Spindle Turret Head Milling Machine
Dimension: 2000 * 2230 * 2150mm Heading Milling: Taiwan Original Milling Head Taper: NT40 Rated Power: 5HP Max.distation avy amin'ny spindle ka hatramin'ny latabatra: 760mm anarana: Bed Type Milling Machine 5HP Bed Type Milling Machine NT40 Spindle B600 Taiwan Original Milling HeadProduct Details: 1. Ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana asa mavesatra sy lehibe (800-1000kgs). 2. NSK P4 bearings dia noraisina tamin'ny spindle hanatsarana ny fahamarinan'ny milina ary hampitombo ny fiainana miasa. 3. vy avo vy, tantely ...
Masinina telo miorina mitsivalana mitsivalana 1370 * 405mm Latabatra Ary 140mm Spindle Quill
Latabatra: 1370 * 405mm Lanja Net: 2900kg Taper: NT40 Spindle Quill: 140mm Max.disty avy amin'ny spindle mankany amin'ny latabatra: 640mm anarana: Bed Type Milling Machine B600SC NT40 Spindle Bed Type Milling Machine 1370 * 405mm latabatra 140mm Spindle QuillCompanyFeature: 1. Mihoatra ny telo amby roapolo taona niainana ny vokatra indostrialy. 2. Ireo maodely rehetra nahazo alalana tamin'ny ISO9001 nankatoavina. 3. Malaza be manerana ny firenena. 4. Manana serivisy sy teknolojia fanohanana matihanina izahay. 5. Vidiny mifaninana amin'ny kalitao ...
54 Inch Turret Milling Machine, milina mavesatra miasa amin'ny fikarakarana karazana milina fikosoham-bary
Latabatra: Screw 54 Inch: kojakoja momba ny baoritra: Heavy Work Pioses Processing Spindle Quill: 140mm Max.disty avy amin'ny spindle ka hatramin'ny latabatra: 640mm anarana: Bed Type Milling Milling 54 Inch Bed Type Milling Machine B600SC Heavy Work Pieces ProcessingProduct Features: 1. Milling and mahcine mankaleo ho an'ny fanodinana singa avo lenta. 2. Ampiasao ny spindle nafarana. Aorian'ny fanamafisana sy fanamafisana ary fanodinana matetika dia alao antoka fa avo lenta sy avo lenta.3. Taiwan tany am-boalohany Milli ...